Ụdị dị n'akụkụ maka ụmụ nwoke | Ndị nwoke mara mma
Ụdị akụkụ dị n'akụkụ maka ụmụ nwoke
Alicia tomero | 12/06/2022 10:40 | Akpụchasị, Nlekọta onwe onye, ejiji, Ylesdị edozi isi, Ụdị
Anyị na-ebi n'oge nnwere onwe zuru oke iji nọrọ na edozi isi ọ bụla. Ihe doro anya bụ na ejiji na edozi isi adịghị ahapụ ya ma anyị na-elekwasị anya na nke a kedu ka ha ga-esi na-akwado sideburns. Ụdị akụkụ dị n'akụkụ maka ụmụ nwoke ga-adabere na ya kedu ka ha siri pụta n'akụkọ ihe mere eme na tumadi nke nha onye.
Akụkụ N'akụkọ ihe mere eme nile ha enyela otutu ozi gbasara onye ahu onye na-eyi ya. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-aga na echiche na edozi isi na-eme ka ụdị ụfọdụ nke ọha iche na ọbụna akụ na ụba ma ọ bụ ọgụgụ isi.
Sideburn adịghị echefu, ọ bụ akụkụ bụ isi na ntutu isi nwoke. Taa enwere ọtụtụ ọkacha mmasị nke njedebe nke ntụtụ ga-agbaso n'otu ụdị. Otú ọ dị, e kwesịrị iburu n'obi na mpaghara a nke ahụ Ọ bụ akụkụ dị mkpa maka edozi isi, n'ụzọ dị otú a, ọ ga-amasị gị nke ukwuu.
1 Kedu ihe bụ sideburns?
2 Sideburns site na obosara
3 n'ihi ọdịdị ya
4 Site n'ịdị elu nke sideburns
Kedu ihe bụ sideburns?
Sideburns bụ mpaghara ntutu na dị n'akụkụ isi ma jikọta n'elu isi na afụ ọnụ. Ogologo ya na njupụta ya ga-adabere na njedebe nke onye na-edozi isi ma ọ bụ ọkachamara na ebe a ga-agwụcha ikpeazụ nke a ga-enye edozi isi iji megharịa otu ihe oyiyi maka ihu ahụ.
Sideburns site na obosara
Ndị a akụkụ akụkụ dị obosara ma ọ bụ obosara nke ukwuu, Ha dị oke egwu na ebe ọ na-emepụta ohere buru ibu n'akụkụ ihu. Karịsịa ọ bụ ụdị ntụtụ emepụtara maka ụmụ nwoke nwere obi ike ya mere a ga-eburịrị ha mgbe niile hazie ma nụchaa.
Ị nwere ike obosara eke, nyere na mmezi ya adịghị aghọ oke oke, ya mere na njedebe mepụta anya dị mfe karị, ma edoziri. Ịkpụ ntutu nwere ọtụtụ ọdịda ma na-esonyere ya na ụdị nke a dị n'akụkụ.
Ụdị ụlọ nsọ sara mbara nke ọzọ bụ nke na-ele anya ihe kacha mma ma na-enyekarị ọdịdị ọtụtụ ihe eke na stylized. Ndozi ya na-achọkarị nraranye ka ukwuu ka atụmatụ ya wee nọgide na-emebi emebi.
n'ihi ọdịdị ya
Ntụtụ kacha elu. O nwere ọdịdị nke ya tụrụ aka n'ala. Ọdịdị ya dị nnọọ iche na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ na-apụta nke ukwuu ma na-adọrọ adọrọ. Na-enwe mmetụta nke ọma n'ụzọ gị na ndị mmadụ nwere ihu obosara ma nye onye ọ bụla na-eyi uwe rocker style.
akụkụ anọ. Ọ bụ ihe kacha ochie na nke anyị na-ejikarị ahụ. Ebipụ ya bụ akụkụ anọ ma ọ na-abịarute n'akụkụ afụ ọnụ. Ọ bụ ụzọ mara mma isi yi ya.
Ogologo na mma. Maka ndị ikom nwere a ogologo ihu ọ bụ mma ịkpụ. Ọdịdị ya na-ebelata ka ọ na-ejikọta na ajị agba, ma na-agwụchaghị na elu.
Ụdị L Ụdị a bụ ihe pụrụ iche nke a na-ahụkwa nke ọma n'ebe ndị na-eme ememme na-enye onwe ha àgwà siri ike ma dị oke egwu. Anyị nwere ihe atụ na Elvis Presley. Obi abụọ adịghị ya, ọdịdị ya dị nnọọ iche n'ihi ọdịdị L ya, nkwụsị ya ga-ejikọta ya na ajị agba ma mee ka ajị agba n'onwe ya nyere aka ịmepụta àgwà a.
ụlọ arụsị ọkụ. Ha bụ ụlọ arụsị obosara nke ukwuu, a na-ejikwa ha eme ihe n'ọnọdụ dị oke egwu. A na-ejikarị ha eme ihe n'oge pụrụ iche, ebe ọ bụ na ọ dị ole na ole ndị na-anwa anwa. Ọdịdị ya nwere a agwa obodo ma mara mma nke ukwuu.
Site n'ịdị elu nke sideburns
N'ogo nke lobe. Ọ bụ ụdị nhụsianya kachasị kpochapụ, maka ndị na-achọghị ịpụta na onyinyo ha ma nọgide na-enwe ọdịdị ihu nkịtị. Na ụdị a na-ebu ihe ziri ezi ma mara mma.
Dị mkpụmkpụ. Site n'ụdị akụkụ dị otú a, ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbubiga onwe ya ókè banyere idobe ha n'ọnọdụ dị mma. Nlekọta ya dị nnọọ mfe na Ha na-emegharị maka ụdị edozi isi ọ bụla. Na ihu gburugburu ha na-atọ ụtọ nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ na-elekọta nhazi nke ihe oyiyi a na-atụ anya ya.
Na ọkwa ntị. Ha bụ ntụtụ na-ezute n'ogo etiti. Ha na-enye nlekọta mara mma ma na-abụkarị ihe kpochapụrụ, ebe ọ na-adị mma na ọtụtụ ihu.
Ntụtụ na-efu ma ọ bụ tụgharịa. Ụdị ntụtụ ahụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ adịghị adị. A na-akpụ ya n'otu ọkwa dị ka ntutu isi, ma ọ bụ naanị n'ọnọdụ ebe a na-akpụ ntutu kpamkpam n'ụzọ dị n'okpuru ịkpụ, ma na ịcha style, mkpụmkpụ n'ogologo. Ọkụ dị n'akụkụ ga-amalite na ala ebe ọ zutere ajị agba a kpụrụ ya, ọ ga-adaba elu ma jiri akọ pụọ.
Ịhọrọ ụdị ntụtụ bụ ihe ga-ekpebi ihe oyiyi na àgwà anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ihu na-akwado ụdị ịkpụ dị iche iche, ọ kacha mma ịnwale ụfọdụ n'ime ndị ahụ akọwara. Nke ukwuu ịkpụ ntutu dị ka sideburn ga-abụ ntọala nke njirimara niile nke ga-agụnye ụdị ịkpụ ị chọrọ. Iji lekọta oke anya nke afụ ọnụ na n'akụkụ enwere nkuzi nke ga-akwado ngwaahịa kacha mma maka nlekọta gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Nlekọta onwe onye » Ụdị akụkụ dị n'akụkụ maka ụmụ nwoke
Ụmụ nwanyị hà na-amasị ndị nwoke akpụ isi?
Blazer ma ọ bụ American?